Budata WinZip maka Windows
Free Budata maka Windows (0.95 MB)
WinZip, otu nime sọftụwia izizi nke na - abata m nuche mgbe ọ na - abịakute faịlụ mkpakọ na mmemme decompressing faịlụ, bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ otu nime mmemme akuko eji eme ihe nụwa niile. Nke ukwuu nke mere na maka ọtụtụ ndị ọrụ e nwere ma WinRAR ma ọ bụ WinZip.
WinZip; .zip, .rar, .tar, .bz2, .zipx, .7z, .cab, .jar, GZIP (.gz, .taz, .tgz), BZ2 (.bz, .bz2, .tbz, .tbz2) , LHA / LZH (.lha, .lzh), Cabinet (.cab), Disc Image (.img, .iso), Compress (.tz, .z), UUencode (.uu, .uue), XXencode (.xxe) )), MIME (.b64, .mim), BinHex (.bhx, .hqx) na-enye ohere ọtụtụ faịlụ mkpakọ ma ọ bụ Archive faịlụ formats. Nụzọ dị otú a, ịnwere ike ịdebe faịlụ na data na kọmputa gị noge ọ bụla site na usoro mkpakọ dị iche iche, ma ọ bụ ịnwere ike wepu data echekwara na faịlụ nchekwa.
Site na nsụgharị ọhụrụ ya, WinZip na-enye ndị ọrụ ya ọrụ dị mfe iji ma dị elu na njikwa ngwa ngwa nke ndị ọrụ kọmputa nke ọkwa niile. WinZip na-ejikọ ọtụtụ atụmatụ bara uru dị ka izo ya ezo nke faịlụ pịakọtara maka ndị ọrụ chọrọ ịchekwa faịlụ ha kpamkpam, nhọrọ mkpakọ dị elu maka ndị ọrụ chọrọ ịchekwa nha faịlụ mgbe ha na-ezipụ e-mail, onye nyocha faịlụ dị elu maka ndị ọrụ chọrọ mfe ịnyagharịa. netiti folda, na ọtụtụ ndị ọzọ Ọ bụ otu nime sọftụwia kwesịrị ịdị na kọmputa.
Site na mmemme a, nke nwere nkwado mwekota maka Yahoo!, Gmail, Outlook na ọtụtụ ndị ahịa e-mail, ị nwere ike mezue mkpakọ faịlụ akpaka, usoro nchekwa na izo ya ezo mgbe ịchọrọ izipu e-mail.
Ọ na-enye nkwado maka ihe niile mara abịakọrọ faịlụ. Naanị otu ịpị, ị nwere ike decompress zip, zipx, rar, 7z, tar, gzip, vhd, xz na ọtụtụ faịlụ ndị abịakọrọ nwere ọtụtụ ntinye faịlụ na sekọnd.
Ọ na-enye gị atụmatụ niile nke njikwa faili dị elu. Nwere ike mfe imeghe, dezie, idetuo, akpali ma ọ bụ ịkọrọ gị niile faịlụ.
Ọ na-echebe nzuzo gị na nchekwa zuru oke. Ọ-enye gị ohere encrypt gị niile chọrọ faịlụ mgbe archiving.
Ọ na-enye gị ohere ịkekọrịta faịlụ buru ibu na mgbasa ozi mmekọrịta, ozi-e, ozi ngwa ngwa na ọrụ igwe ojii site na ịpịkọta ha.
Ekele ya elu MP3 mkpakọ mma, ọ na-enye gị ohere ịkekọrịta faịlụ egwu na obere nha.
Ọ bụrụ na ị na-achọ mmemme ngwangwa, nchekwa na mfe iji maka mkpakọ faịlụ na arụmọrụ decompression, anyị na-akwado ka ị nwalee WinZip.
* Mgbe ị wụnye WinZip, ị nwere ike ịmalite iji ụdị ikpe ahụ site na ịpị bọtịnụ Jiri Nyocha Evaluation.
Nha faịlụ: 0.95 MB
Mmepụta: WinZip Computing